क्यारीकेचर गर्दा मरणासन्न हुने गरि पिटाई खान्थे – धुर्मुस-Nagarikaawaj.com
क्यारीकेचर गर्दा मरणासन्न हुने गरि पिटाई खान्थे – धुर्मुस
फरक–फरक भूमिकामा अभिनय गरेर दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन दिदै आएका चर्चित हास्यटेलिसिरीयल मेरीवास्सैका निर्देशक एवं लेखक सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ नचिन्ने सायदै होलान । चचिर्त हास्य कलाकार कट्टेल नेपालदेखी देशविदेशमा रहेको नेपालीहरुका लोकप्रिय वनेका छन । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘मेरी बास्सै’ मा २७ वटा चरित्रमा देखा परिसकेका कट्टेल धुर्मुस, आइते, खड्काजी, कमरेड केपी ओली र खडानन्द गुरुका रुपमा दर्शकले बढी मन पराएका छन । झापाको गौरा भन्ने स्थानमा जन्मीएका उनै कट्टेलसगँ वुटवल आएको अवसर पारी रगंपत्रकार रामजी ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशं –
कति भयो कला क्षेत्रमा आउनु भएको ?
– कला क्षेत्रमा लागेको त धेरैनै भयो । औपचारीक रुपमा भन्नेहो भने २०५९ सालदेखी प्रवेश गरेको हो । गीतान्जली भन्ने नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रमबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश पाएको हुँ । केदार घिमीरे ‘माग्ने बुढो’सँग २०५९ सालमा यो क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा लागेको हो ।
धुर्मुस वन्न कत्तिको दुःख गर्नुप¥यो ?
– राम्रो कुरा । मैले यो धुर्मुस वन्नका लागी एकदमै ठुलो त्याग, तपस्या गरेको छु । यो क्षेत्रमा घरपरिवा र कुनै पनि आफन्तवाट सहयोग मिलेको थिएन । असहयोग हुदाहुदै पनि निकै सघंर्ष गरे । मैले क्यारिकेचर सिक्न पनि हलो जान्थे । मैले कक्षा सात देखी दश कक्षा सम्म हलोजोतेरै अध्यन गरेको हो । विहान ५ वजेदेखी गोरु लिएर खेतमा जानेगर्थे । जुनै समयमा पनि मैले क्यारिकेचर गर्ने र सिक्ने गर्थे । स्कुलहरुमा भएका हरेक प्रतियोगीतामा मैले विभीन्न व्यक्तीको क्यारिकेचर गर्ने गर्थे । हरेक कार्यक्रममा मैले प्रथम स्थाननै हासील गरेपनि कहिल्यै शिक्षकहरुले मायाँ गरेनन । किनकी मैले शिक्षकको क्यारिकेचर गर्दा एक जना शिक्षकले मरणासन्न हुने गरि पिट्नुभएको थियो । घरवाट एक रुपैयाँको सहयोग भएन । हलो जोतेरै कमाउनुपथ्र्यो । त्यस्तै विभीन्न सघंर्ष र ईख पेच लिदै म यहाँ सम्म आए । दुःखका कुरा गर्नेहो भने मेरा भ्रखरै पनि आसुँ आउँछन ।
निम्न वर्गको व्यक्ती कसरी छिर्नुभयो काठमाण्डौ ?
– राजाको हत्या भएको दिनै म काठमाण्डौ छिरेको हुँ । घरवाट १७ सय रुपैयाँ र एउटा तन्ना चोरेर आएको हुँ । त्यती हो मैले अहिले सम्म घरवाट ल्याएको भन्ने कुरा । काठमाण्डौ आउनेवित्तीकै मैले निकै सघंर्ष गर्नुप¥र्यो । हुनत त्यस अघिपनि निकै सघंर्ष गरेको हो । काठमाण्डौ आउनेवित्तीकै कस्लेनै कलाकारीतामा अवसर दिन्छर, त्यसपछाडीका २ वर्ष धेरै गाह्रो जिन्दगी विताए ।
कलाकारीतामा छिर्ने अवसर कसरी मिल्यो ?
– मैले यो क्षेत्रमा छिर्नका लागी धेरै तिर धाए । सन्तोष दाईको हिजोआजको कुरामा ६ महिना धाएर एउटा डाईलग वोल्ने मौका मिलेको थियो । त्यही सिलसिलामा खेम सर्मा भेट हुनुभयो थापाथलिमा । उहाँ वस्ने फ्लाटमै म पनि एउटा रुम लिएर वसे । उहाँले मलाई धेरै सपोर्ट गर्दै जानुभयो । कथा र हास्य क्षेत्रमा विभीन्न कुराहरु राम्रो लेख्थे, त्यही लेखाईको आधारमा रहेर मलाई जितु नेपाल दाईले गितान्जलीमा अवसर दिनुभयो । उहाँहरुकै कारणलै मैले कलाकारीतामा छिर्ने मौका मिलेको थियो । उहाँहरुलाई मैले सधै सम्झन चाहान्छु र उहाँ भन्दा म कहिल्यै पनि ठुलो भए भन्दीन ।
कस्को प्रेरणाले डोहो¥यायो कलाकारीतामा ?
– हरीवशं आचार्य र केदार घिमीरे दाईको प्रेरणालेनै यहाँ सम्म डोहो¥याएको हो भन्न चाहान्छु । उहाँहरुको त मैले सिरीयलमा अभिनय समेत गरीसकेको छु । उहाँहरुको प्रेरणा नपाएको भए अहिले धुर्मुस नामले चिनीने मौका मिल्दैनथ्योहोला । त्यस वाहेक घरपरिवार, श्रीमती, साथीहरु र जितुदाई हुनुभयो, केदारदाई लगाएत धेरैको सहयोग मिल्यो । उहाँहरुलाई सम्झीन्छु ।
प्रशगं वदलौ, छोटो अवधिमै ठुलो सेलिव्रेटी हुनुभयो केटीहरु कतिको पछि लाग्छन ?
– हाहाहा(लामो हासो) केटीहरु पछि लाग्नु स्वभाविक हो । मेरो फ्यानहरु प्रशस्तै हुनुहुन्छ, तर मेरो कला मन पराएर मलाइ मन पराउने छन् जस्तो लाग्छ । म कलाक्षेत्रबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ यो क्षेत्रमा लागेको हुँ । एक त विवाहित अर्को कुरा कुनै केटीको पछि कहिल्यै लागिन । मेरो नेचर त्यस्तो छैन । न कलेज टाईममा त्यस्तो भयो न अरु समयमा । मेरो सोचाई कहिल्यै पनि केटीतिर गएन ।
अत्यन्तै दुःखको क्षण सम्झनुसन ।
– मैले भनिहालेनी काठमाण्डौमा छिर्नेवित्तीकै दुःखका दिन र कष्ठकर जिन्दगी विताउनुप¥र्यो । घरवाट ल्याएको पैसा सकिहाल्यो । ५ रुपैयाँको पाईनापोल विस्कुट खाएर ४ रात कटाउदाँ क्षणलाई चाहेर पनि कहिल्यै विर्सदैन । त्यो वेला वेला वेलामा सम्झन्छु त्यो सम्झेर कहिलेकाही भक्कानीनेगर्छु ।
अन्त्यमा के भनुहुन्छ ??
सवैभन्दा भन्दा ठुलो कुरा त मेरी वास्सैलाई साह्रै मन पराउनुभएको छ । त्यसैमा खुसी छु । अझै मायाँ गरिदिनुहोला, र कुनै पनि सुझाव सल्लाह भए पनि भनिदिनुहोला भन्छु । धुम्र्रस जस्तो छ, जे छ तपाईहरुकै लागी छ भन्छु । नागरिक आवाज डट कम प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद